WAR CUSUB: Cabdi ILay oo markale la horkeenay Maxkamadda Addis Ababa, Maxaase lagu xukumayaa? – Puntlandtimes
WAR CUSUB: Cabdi ILay oo markale la horkeenay Maxkamadda Addis Ababa, Maxaase lagu xukumayaa?
October 19, 2018 W LAASCAANO
ADDIS ABABA(P-TIMES)- Maxkamadda 19aad ee Federaalka Itoobiya, fadhigeeduna yahay magaalada Addis Ababa ayaa markale maanta la horkeenay Madaxweynihii hore ee Ismaamulka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar iyo sadex kamid ah xubnihiisii maamulka oo loo haysto dacwado ay ku soo oogtay Xeer Ilaalinta guud ee dalkaas.
Madaxweynihii hore ayaa kasoo hormuuqday Maxkamadda, waxaana maanta lafilayaa in lagu qaado dacwadaha lagu soo oogay, iyadoo afar jeer oo hore dib loo dhigay dacwadiisa, markii ay codsadeen in ay waqti dheeraad ah helaan xubnaha dacwad oogayaasha ah.
Eedaha waa weyn ee ilaa hadda loo haysto Cabdi Ilay waxaa kamid ah dad la laayay, Kufsi, Rabshado ka dhacay Jigjiga 4tii August, Awooda maamulka oo si aan fiicneyn loo isticmaalay iyo arrimo kale oo ay ku jiraan amar diido uu ku sameeyey Madaxda sare ee Itoobiya.
Kasokow eedaha loo haysto ee kuwajahan arrimaha gobalka Soomaalida, waxaa taagan arrimaha Argagixisada oo ku wajahan Kaniisado la sheegay in ay gubeen taageerayaashiisa markii ay ciidamada Milateriga dalkaasi galeen magaalada Jigjiga, xukunkana ay isaga ka tureen.
Faahfaahin badan lagama hayo ilaa hadda waxa uu noqon karro Xukunka lagu xukumayo eedaynayaasha, balse Cabdi Ilay ayaa dhawaan codsaday in lacafiyo, maadaama uu mudo dheer usoo shaqeynayay Itoobiya, dalkuna uu ku jiro marxaladda Is cafinta oo isbedeladu ay keenen.